Super Mario Run waa ciyaartii ugu horreysay ee Nintendo u sameysay dadka isticmaala Android. Mid ka mid ah jilayaasha ugu halyeeyga shirkadda Japan, oo aad ka ciyaari karto taleefankaaga. Cayaar soo dejintooda ku taal Play Store horay loogu tiriyay malaayiin muddo dheer.
Hadaad jeceshahay Super Mario Run ama aad rabto inaad waxbadan ka ogaato kulankaan, waxaad ka heli kartaa qaybtaan. Warka ku saabsan ciyaartan Nintendo ee aad gacantaada ku hayso, si aad wax badan uga ogaato ama aad uga sii fiicnaato.
Sida loogu ciyaaro Mario Bros mobilada
by Ignacio Sala samee Bilaha 5 .
Mario iyo Sonic waa labada kulan ee ugu da'da weyn ee sii wadaya in ka badan 30 sano kadib ...
Nintendo waxay soo saartay in ka badan $ 1.000 bilyan oo cinwaankeedu yahay aaladaha moobaylka
Bishii Sebtember 2016, Nintendo wuxuu soo bandhigay ciyaartii ugu horreysay ee aaladaha mobilada, Super Mario Run, in kastoo markii hore aysan imaan illaa ...
by Eder Ferreño samee 2 sano .
Nintendo waa mid ka mid ah istuudiyaha ciyaarta ugu caansan adduunka. Muddo bilo ah ayey naga tagayeen ...
Ku hel Super Mario Run qiimaha nuska laga bilaabo Maarso 10 ilaa 25
Haddii aanan tixgelin siin ciyaarta / shabakadda bulshada ee Nintendo ay sii deysay ka hor Super Mario Run, waxaan tixgelin karnaa ...
Super Mario Run wuxuu dhaafey 100 milyan oo soo dejin ah
Maalmo ka hor, waxaan ka wada hadalnay ciyaarta soo socota ee garaaci doonta Play Store rubuca hore ...
Super Mario Run ayaa la soo dejiyey 200 milyan oo jeer laakiin ma soo saarto faa'iido
by Eder Ferreño samee 4 sano .
Dhawr bilood ayaa laga joogaa markii Nintendo uu bilaabay Super Mario Run ee Android iyo iOS. Waxay ahayd ciyaartii ugu horreysay ee ...
Nintendo wuxuu ku dilaa Super Mario la orodyahankan Android
by Francisco Ruiz samee 5 sano .
Kadib markaan awoodo inaan rakibo oo tijaabiyo Super Mario Run for Android, oo aan horeyba kuugu sheego inaanay noqon ...
[APK] Waxaad hadda ka soo dejisan kartaa oo aad ku rakibi kartaa Super Mario Run for Android Google Store Store, oo haddii terminaalkaagu aanu la jaan qaadi karin, halkan waa APK !!
Mid ka mid ah kulamada sida weyn loo wada sugayo xilligan, Super Mario Run for Android, ayaa hadda diyaar u ah kala soo bax ...
Super Mario Run horeyba wuxuu u lahaa taariikh la sii daayo Android: Maarso 23
by Jose Alfocea samee 5 sano .
In ka badan seddex bilood ka dib markii si gaar ah loogu soo bandhigay qalabka Apple iOS, sugitaanku waa socdaa…
Super Mario Run wuxuu gaaraa 78 milyan oo soo degsasho ah, laakiin kaliya 5% ayaa iibsaday
Way adag tahay in laga hadlo ciyaar aad u weyn sida mid ka mid ah xiddigaha oo ...
Super Mario Run ayaa imanaya Android bisha Maarso
Waxaa weheliya Pokémon GO, daahfurka Super Mario Run dhamaadka sanadkii hore 2016 wuxuu kamid ahaa the